04 Archives - Tameelay
(၄-၇-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
July 4, 2020 by daddy
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း(၄-၇-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ ၁။ (၄-၇-၂၀၂၀) ရက်နေ့အတွက် COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရာတွင် – အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) (NHL) မှ (ပထမအသုတ်) ဓာတ်ခွဲ နမူနာ (၆၅၅)ခု၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (DMR)မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၂၁) ခု၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (မန္တလေး) (PHL, Mandalay) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၇၀) ခု၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (မော်လမြိုင်) (PHL, Mawlamyine) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၂၆) ခု နှင့် ရန်ကုန်မြို့၊ အမှတ် (၁) တပ်မတော်ဆေးရုံကြီး ခုတင် (၁၀၀၀) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၂၇) ခု၊စုစုပေါင်း (၁,၅၉၉)ခု အား … Read more
Categories Uncategorized Tags 04
” ပစ္စည်းပျောက်တဲ့အခါ ၊ သူခိုး ခိုးခံရတဲ့အခါ ပြုလုပ်ရတဲ့ ယတြာနည်းတစ်ခု ဗဟုသုတအလို့ငှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် … ကြက်သွန်နီတစ်ဥကို ကန့်လန့် ထက်ခြမ်း ခြမ်းပါ။ အမြိတ်ထွက်တဲ့ဘက် အခြမ်းနဲ့ ပစ္စည်းပျောက်တဲ့ (ပစ္စည်းထားတဲ့) နေရာကို ပွတ်ပေးပါ … ။ ပစ္စည်းပြန်ရဖို့ အသံထွက်ဆုတောင်းပါ။ အောက်မှနေ ကြွေပန်းကန်ပြားခံပြီး ပွတ်နိုင်ပါတယ်။ ပစ္စည်းပျောက်တဲ့နေရာမသိရင် ကြွေပန်းကန်ပြားပေါ်မှာပဲ ပွတ်ပြီးဆုတောင်းပါ …။ အမြစ်ရှိတဲ့ဘက် အခြမ်းကို ကြွေပန်းကန်ပြားပေါ်အခုလိုတင်လိုက်ပါ။ ကြွေပန်းကန်ပြားကို ပစ္စည်းပျောက်တဲ့နေရာမှာချပါ ။ အမြစ်ပေါ်မှာ ဖယောင်းတိုင်ထွန်းပါ။ (နေရာမသိရင် အဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာ ထွန်းပြီးဆုတောင်းပါ) ဘယ်နေ့ ဘယ်ချိန်မဆို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် … ။ ဖယောင်းတိုင်အရေအတွက် အဆင်ပြေသလို ဉာဏ်ရှိသလိုထွန်းနိုင်ပါတယ် …. ။ ပျောက်နေသောပစ္စည်းများ အမြန်ပြန်ရနိုင်ကြပါစေ … မကြာခဏ … Read more
Categories General Knowledge Tags 04
လေးဘက်နာ လက်တွေ့သက်သာတဲ့ ရွှေထက်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ဆေးနည်းများ
သပြုသီးနဲ့ဆားကို အချိုးတူပြုတ်ပြီးအငွေ့ခံ ချွေးအောင်းပေးလိုက်ပါ ။ တစ်ကိုယ်လုံးမှာရှိတဲ့ အပူအပုပ် ချွေးတွေထွက်လာပြီးရင် ရေချိုးပေးပါ ။ အစားရှောင်စရာမလိုအောင် သက်သာတယ် ။ ခြေစစ် လက်စစ် တွေလည်းမကိုက်တော့ပါဘူး။ မြန်မာ့ဆေးစွမ်းနှင့်အိမ်တွင်းဆေးမြီးတိုများ ကျန်းမာရေး အသိမျှဝေသည် သပြုသီး ကိုဟင်းချက်စားလျှင်ဆေးဘက်ဝင်ပုံ ငါးခူနဲ့သပြုသီးချက်စားပါ။ကျောက်ကပ်နှလုံးကောင်းလာပါမည်။ ငါးရံ့ကင်ပြီး သပြုသီးကိုဟင်းချို ချက်စားပါ။ဆီးချိုသက်သာပျောက်ကင်ပါသည်။ သပြုတ်သီးကိုပြုတ်ပြီး ငပိရည်နဲ့တိုးစားပါ။ နှလုံးအားကောင်လာပြီးဆီးရွင်လာပါမည်။ ဆီကျောက်တည်သူများအတွက်ဆေးနည်းကောင်းတစ်လက်သပြုသီးအရွက်ကိုပြုတ်ပြီးသုံးခွက်တစ်ခွက်တင်ပြုတ်သောက်ပ့ါ။ ဆီးကျောက်တည်သူများအတွက် ကျောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းကြွေကျပြီးသက်သာပျောက်ကင်ပါသည်။ သပြုသီးအခေါက်ကို ဝမ်ကိုက်သူများအတွက်ကျောက်ပျဉ်နဲ့သွေးပြီးဆားနဲ့ရောပြီးသောက်ပါ။ ကျန်းမာပါစေဗျာ SayarMyo သျပဳသီးနဲ႔ဆားကို အခ်ိဳးတူျပဳတ္ၿပီးအေငြ႕ခံ ေခြၽးေအာင္းေပးလိုက္ပါ ။ တစ္ကိုယ္လုံးမွာရွိတဲ့ အပူအပုပ္ ေခြၽးေတြထြက္လာၿပီးရင္ ေရခ်ိဳးေပးပါ ။ အစားေရွာင္စရာမလိုေအာင္ သက္သာတယ္ ။ ေျခစစ္ လက္စစ္ ေတြလည္းမကိုက္ေတာ့ပါဘူး။ ျမန္မာ့ေဆးစြမ္းႏွင့္အိမ္တြင္းေဆးၿမီးတိုမ်ား က်န္းမာေရး အသိမွ်ေဝသည္ သျပဳသီး ကိုဟင္းခ်က္စားလွ်င္ေဆးဘက္ဝင္ပုံ ငါးခူနဲ႔သျပဳသီးခ်က္စားပါ။ေက်ာက္ကပ္ႏွလုံးေကာင္းလာပါမည္။ … Read more
လောကမှာ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးနဲ့ အယုတ်ညံ့ဆုံးလုပ်ရပ်တွေထဲမှာသူတစ်ပါးအိမ်ထောင် ကိုဖြိုခွဲတာလည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလူတွေက ယာယီတော့ ပျော်ရွှင်ရမယ်ဒါပေမယ့်ဘယ်တော့မှ ငြိမ်းချမ်းမှု၊ ပျော်ရွှင်မှုကိုရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး သူတစ်ပါးမိသားစုကိုဖြိုခွဲတဲ့သူတွေ၊ဖောက်ပြန်တဲ့သူတွေခံစားရမယ့်အရာတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးလည်း သတိထားဆင်ခြင်နိုင်ကြပါစေ။ (၁) ပူလောင်ခြင်း သူတစ်ပါးအိမ်ထောင်ကိုဖြိုခွဲတဲ့သူတွေနဲ့ ဖောက်ပြန်တဲ့သူတွေအမြဲတမ်းခံစားနေရမယ့်အရာကတော့ ပူလောင်ခြင်းပါပဲ သူတို့ရင်ထဲမှာ နောင်တရသလိုလို၊ ကျေနပ်သလိုလိုမှားနေသလိုလို၊ မှန်နေပြန်သလိုလို မသေချာမရေရာတဲ့ခံစားချက်တွေ အမျိုးမျိုးဖြစ်နေပြီး ဘယ်တော့မှအေးချမ်းရမှာမဟုတ်ပါဘူး တစ်ခါတလေအလိုလိုနေရင်း ဒေါသတွေထွက် ရှူးရှူးရှားရှားတွေဖြစ်ပြီးဘာတွေကိုဒေါသထွက် လို့ထွက်မှန်းမသိအောင်ကို ပူလောင်ပြီး အရူးတစ်ယောက်လို ဖြစ်နေမှာပါ။ (၂) စိုးရိမ်ထိတ်လန့်ခြင်း ဒီလိုလူမျိုးတွေရဲ့ပတ်သက်မှုဟာ မတရားသဖြင့်ရရှိထားတဲ့ ပတ်သက်မှု မျိုးဖြစ်တာကြောင့် အမြဲတမ်းပူပင်သောကရောက်နေရမှာပါဒါ့အပြင်ဘယ်တော့ဝဋ်ပြန်လည်မလဲ၊ဘယ်တော့များတခြားသူနောက်ပြန်ပါသွားမလဲ၊ကိုယ့်ကိုယ်ဘယ်တော့ထားသွားမလဲဆိုပြီး တစ်ချိန်လုံး စိုးရိမ်သောကရောက်နေရမှာပါ ဒါ့အပြင် ကြာလာတဲ့အခါသူတို့ကြားမှာနည်းနည်းလေး ပြဿနာ ရှိလာတာနဲ့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်အပြစ်တင်ပြီး စိတ်ညစ်ပြီးရင်းညစ်လာရမှာပါ။ (၃) ဝဋ်လည်ခြင်း ဝဋ်ဆိုတာက တကယ်ကိုလည်ပါတယ်ခုခေတ်မှာ ဝဋ်လည်တာပိုတောင်မြန်ပါသေးတယ်ဒါကြောင့် ဒီလိုလူတွေဟာ သူတစ်ပါးကို မျက်ရည်ကျအောင်၊ရင်ကွဲအောင်၊နာကျင်အောင်လုပ်ခဲ့သမျှသူတို့ပြန်ခံစားရမှာပါ … Read more
နူးညံ့သိမ်မွေ့ပါ,သို့သော်. မိန်းမသားဆိုတာ နူးညံ့သိမ်မွေ့ရပါမယ်။ ဒါပေမယ့်…? အရာရာမှာ စိတ်ပျော့ညံ့ဖို့ ယုံကြည်လွယ်ဖို့ ဝမ်းနည်းဖို့ အရူံးပေးဖို့ဆိုတာတွေကို ယောင်လို့တောင်မတွေးပါနဲ့။ မိန်းမသားမို့ တစ်ခါတလေ အားငယ်မိချင်အားငယ်မိမယ်။ ဝမ်းနည်းမိချင်ဝမ်းနည်းမိမယ်။ ဒါပေမယ့် မာနတရားနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီး မာန်တင်းတတ်ရမယ်။ အထူးသဖြင့် ပျော့ညံ့တဲ့စိတ်ထားနဲ့ သူတစ်ပါးလွမ်းမိုးခြယ်လှယ်တာ မခံပါနဲ့။ အရှက်တရားနဲ့ သူတစ်ပါးအရိပ်ကိုမမှီခိုပါနဲ့။ မာနတရားနဲ့ သူတစ်ပါးကို လွယ်လွယ်အောက်ကျို့မခံပါနဲ့။ အရူံးပေးတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ သူတစ်ပါးကိုအလွယ်တကူ ခယဦးမညွတ်ပါနဲ့။ အားငယ်မိတဲ့အခါမာနတရားနဲ ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ပြီးမာန်တင်းတတ်ရမယ်။ ဝမ်းးနည်းတဲ့အခါ ကျဆင်းလာတဲ့မျက်ရည်ကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းသုတ်လို့ လာမယ့်နေ့ရက်တွေမှာ ပျော်ပျော်နေတတ်ရမယ်။ အရူံးတွေနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါ အရူံူးကိုသင်ခန်းစာရယူပြီး လှေကားထစ်လိုနင်းတက်ပြီး အောင်မြင်မူရအောင် ကြိုးစားတတ်ရမယ်။ မိန်းမသားဆိုတာ နူးညံ့ သိမ်မွေ့ရပါမယ်။ ဒါပေမယ့် အရာရာမှာစိတ်ပျော့ညံ့ဖို့ ယုံကြည်လွယ်ဖို့ ဝမ်းနည်းဖို့,အရူံးပေးဖို့ဆိုတာတွေကို ယောင်လို့တောင်မတွေးပါနဲ့။ မဟုတ်ရင်တော့ ကိုယ့်ဘက်ကချည်း ပေးဆပ်နေရမှာပါပဲ။ Nan Khin May … Read more
Categories Tameelay Knowledge Tags 04, Nan Khin May Win
ကိုယ်ကောင်း ကိုယ်စံပြီး ကိုယ်မကောင်းရင် ကိုယ်ပဲ ပြန်ခံရမယ်
မမေ့ကြပါနဲ့ အပ်သွားရာ အပ်ချည်ပါတဲ့ “‘ ကိုယ်ဖောက်တဲ့လမ်း ကိုယ်တိုင်လျှောက်ရမှာဖြစ်သလို ကိုယ်ကောင်း ကိုယ်စံပြီး ကိုယ်မကောင်းရင် ကိုယ်ပဲ ပြန်ခံရမယ် ။ လောကမှာ အသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာ ခဏတာလေးပါ တိုတောင်းလွန်းတဲ့ အချိန်လေးမှာ အငြိုးတွေ ဖွဲ့ကြ လက်စားချေကြ မကုန်နိုင်တော့တဲ့ လောဘဒေါသ ဒါကို လောက နိယာမလို့ သတ်မှတ်အုံးမလား ။ ခုခေတ် စာတွေပိုတတ်လာကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပညာတတ်တဲ့သူရှားလာတယ် ။ ပရဟိတ လုပ်ငန်းတွေ အားတက်သရော လုပ်လာကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ အချို့သူတွေမှာ ……??? ကိုယ်ချင်းစာစိတ်တွေ ကင်းလာကြတယ်။ အပြောတွေချိုလာကြတယ် ဒါပေမဲ့ …??? အချို့သော ဆက်ဆံရေးတွေက မာယာတွေနဲ့ ခါးသက်နေကြတယ် ။ အလှူအတန်းတွေ ရက်ရောလာကြတယ် ဒါပေမဲ့ အတ္တတွေကြွယ်ဝလာကြတယ် ။ နုတ်ဖျားထက်မှာ … Read more
Categories Tameelay Knowledge Tags 04, ma po